Idizayini Yesimanje + Izakhiwo Zomlando
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Billie
Jabulela lesi sakhiwo somlando esisanda kubuyiselwa efulethini lakho eliyimfihlo lokulala eli-2. Gcoba elangeni lasekuseni ngenkomishi yekhofi kuvulandi wakho wangasese. Isakhiwo esivulekile esinophahla oluyizinyawo ezingu-11, ikhishi elikhulu nesiqhingi sasekhishini, ama-countertops amhlophe e-quartz, amapulangwe asanda kuqedwa, kanye nemibhede ethokomele ngendlela emangalisayo konke kuzokwamukela ekhaya lakho kude. I-In-Unit Laundry, i-WIFI, i-4K TV enekhebula kanye ne-Netflix/Amazon, i-Wine Cooler, ukungena kwe-Elevator kanye nokupaka emgwaqweni.
Ilayisensi # TBES-BEJSS8
Sisebenzisa imikhiqizo yokuhlanza evumelana nemvelo futhi sinikezela ngensipho yemvelo esekelwe. Ikhishi eligcwele livumela ukupheka isidlo sasekuseni esikhulu noma wenzele obathandayo isidlo sakusihlwa. Ibhilidi elihlala abantu abaningi ngakho-ke sicela uhloniphe futhi unciphise umsindo.
4.94(209 okushiwo abanye)
4.94 · 209 okushiwo abanye
Bona ingemuva letheku njengoba ushayela phezu kweBlatnik Bridge phakathi kweDuluth neSuperior. Hlola izindawo zokudlela nezindawo zokudlela ze-Craft District entsha, i-Canal Park, iDowntown Duluth, noma vele uhlale ku-Tower Avenue e-Superior esanda kulungiswa. Ungakhohlwa ngamabhishi asePark Point noma eSuperior Point. Thatha uhambo olufushane ukhuphuke ogwini, bhukha uhambo lwe-kayak echibini elikhulu, uqashe amabhayisikili, noma uqashe isikebhe sokudoba! Sicele iziphakamiso uma ucabanga ukuthi kukhona okushodayo. Ngaphansi komgwaqo ungakwazi ukuhlola kalula i-Anchor Bar ukuthola ibhega enhle endaweni yebha yamatilosi endala, indawo yokuphuzela utshwala ye-Earth Rider ukuze uthole ubhiya abawukhethayo, i-Thirsty Pagan, ikhofi ye-Red Mug, noma i-VIP pizza ngaphesheya komgwaqo.
Siyatholakala nganoma imiphi imibuzo ongase ube nayo.
UBillie Ungumbungazi ovelele